Spiritcorner: Fair Trading Vs Bank Charges
Fair Trading ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို စတင်ကြားဖူးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက ထင်ရဲ့။ အသိတစ်ယောက်နဲ့အတူ ကော်ဖီသောက်ဖို့ ဆိုင်ရွေးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မက Starbucks coffee ကို ရွေးချယ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအသိ က ချက်ချင်းကန့်ကွက်ပါတယ်။ Starbucks coffee က Fair trade မဟုတ်လို့ မသောက်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ တခြားဆိုင် တစ်ဆိုင် ပြောင်းသောက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ ကျွန်မအတွက် သိပ်အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးတဲ့ fair trade ဆိုတဲ့ စကားလုံး နဲ့ အကြောင်းအရာကိုလည်း သူက ရှင်းပြခဲ့သေးတယ်။ ဆိုလိုတာက 25 ပြား လောက်သာ ကုန်ကျစရိတ်ရှိတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို 2.50 လောက်နဲ့ ရောင်းတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါတဲ့။ အဲဒိလို အမြတ်ကြီးစားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ campaign တွေအကြောင်း ရှင်းပြရုံသာမက သူကိုယ်တိုင်ပါ လုံးဝအားမပေးတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောပြခဲ့ဖူးတာ အမှတ်တရပါ။
အခုတလောတော့ Bank charges တွေဟာ fair trading မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ဟိုနားဒီနား ကြားရယုံသာမက တီဗွီထဲမှာ သတင်းထဲမှာ တွေ့လာရပြန်ပါတယ်။ အဲဒိ ပိုက်ဆံတွေကို ပြန် claim လို့ရတယ်ဆိုတော့ မျက်လုံးတွေရော၊ နားတွေပါ ပို ပြူးကုန်တာပေါ့။ စိတ်ဝင်တစား လောဘတကြီးကို ရှာဖွေ လေ့လာမိတယ်ဆိုပါတော့တယ်ရှင်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဘဏ်အကောင့်တွေမှာ Agreed overdraft limit ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒိထက်ကျော်လွန်အောင် သုံးစွဲမိလို့ရှိရင် ဒဏ်ကြေးအဖြစ် 25-35 ပေါင်အကြား ဘဏ်အပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ပေးရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒိနှုန်းထားတွေဟာ သိပ်ကိုများပြားတဲ့ အတိုးနှုန်းတွေနဲ့ တွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
2006 Barclays Bank Annual Report အရ သူတို့ရဲ့ အမြတ်ဟာ ကြောက်စရာ လန့်စရာပါ။ စကန့်တိုင်းဟာ ရွှေလို့ဆိုပါရစေတော့။ စကန့်နဲ့အမျှ မိနစ်နဲ့အမျှ အမြတ်အစွန်းတွေဟာ တရိပ်ရိပ် တက်နေပါတယ်။
£2,267 for every second of every day throughout the year, or £136,000aminute လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အဲဒိလို မြတ်နေတဲ့ကြားကတောင် ဘဏ်တွေဟာ unauthorized overdrafts အတွက် ဒဏ်ကြေးငွေကို The Current Bank of England' base rate ထက် လေးဆလောက် ပိုယူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ဘယ်လိုမှကို မတရားတဲ့ကိစ္စ၊ Fair Trading မဟုတ်တဲ့ အဖြစ်ပါလို့ ဆိုကြပါတယ်ရှင်။
What this minority experiences isasuccession of hidden charges designed to make up for the fact that the majority receive their “free” banking. It comes in the form of extortionate unauthorised bank charges. For example, Barclays charges 27.5% for anyone who goes over their agreed overdraft limit. A fee of £30 is charged per account per day, up toamaximum of £90 within each monthly charging period.
On top of that,a“paid referral fee” of £30 is charged when Barclays actually pays out for an item that results in your account going overdrawn by more than £5 without an agreed limit, or by more than £5 above an agreed limit.
In addition, this fee is also charged if Barclays pays any further items that increase your unauthorised borrowing by £1 or more. It is easy to see how an inadvertent slip can costasmall fortune in charges.
Logically, this does not make sense. The cost of offeringabanking service is fundamentally the same for every customer. Sure, there are additional costs, such as the cost of sending outaletter to someone who is overdrawn. But independent experts commissioned by the BBC have estimated that the “true” cost of doing so works out at no more than about £4.50, while the interest charged on that unauthorised overdraft is more than four times the current Bank of England base rate.
In other words, the way costs are incurred and profits made is skewed dramatically against those less able to pay them. That cannot be right.
အဲထိတော့ (လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်အထိ် ) ကိုယ့်ရဲ့ နစ်နာကြေးတွေအတွက် ဘဏ်တွေမှာ ပြန်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ စာရေးတောင်းဆိုလို့မှ အဆင်မပြေရင် OFT ( The Office of Fair Trading ) ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ တရားရင်ဆိုင်နိုင်ပါသေးတယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Consumers can claim back up to six years of charges.Involved alongside HSBC, RBS and Barclays in the test case are HBOS, Lloyds TSB, Abbey, Clydesdale and building society Nationwide. Together they provide about 90 percent of UK personal current accounts.
စာရေးတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အသင့်သုံးလို့ရအောင် ပုံစံနမူနာပါ တခါတည်း ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ လိုအပ်သူများ အသုံးပြုနိုင်အောင် ကျွန်မလည်း အောက်မှာ တစ်ခါတည်း attached လုပ်ပေးထားပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ နိုင်ကြပါစေ။
Posted by clef at 13:48
Labels: Business, Fair trading